SAWIRRO: Askari Millitariga ka tirsan oo balan uga baxay Shabaab – Xeernews24
SAWIRRO: Askari Millitariga ka tirsan oo balan uga baxay Shabaab
Askari ka tirsan ciidamada Xoogga dalka Somaliya qaybta Gobolka Hiiraan, ayaa waxaa la soo xidhiiddhay dagaalyahano ka tirsan Ururka Al Shabaab, kadibna waxa ay u sheegeen inay lacag siinayaan haddii uu fuliyo qorshaha ay iyaga doonayaan.
Wada hadal dhanka taleefoonka ah oo mudd dhexmaray askariga ka tirsan ciidanka Xoogga dalka Somaliya iyo Ragga Shabaabka ka tirsan, ayaa askariga waxa ay kula heshiiyeen inay u dhiibayaan bac ay ku jiraan waxyaabaha qarxa, kadibna uu geeyo xerada Lamagalaay oo ciidanka Xoogga dalka xarun ah, taasi oo ku taalla Magaalada Baledweyne.
Askariga oo Shabaab isaga dhigaya nin daacad ah oo qorshahooda sida ay rabaan ugu fulinaya, ayaa wuxuu arintan ku wargeliyay Saraakiishiisa, waxayna u sheegeen inuu sii wado xidhiidhka ragga Shabaabka ka tirsan, kadibna uu ku balamiyo goob si ay suuragal u noqoto in la qabto raggaasi Shabaabka ka tirsan.
Askarigan oo lagu magacaabo Maxamed Cali Axmed oo Warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu ka sheekeeyay waxyaabihii dhexmaray ragga Shabaabka ah intii uu socday xidhiidhka dhanka taleefoonka.
“Waxyaabaha ay i weydiiyeen waxaa ka mid ahaa in aan awood u leeyahay tagista xarumaha waaweyn ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Amisom, waxaan u sheegay in xarumaha ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom sidda Jabuuti iyo Itoobiya intaba aan tagi karo, intaa kaddib qofkii talleefoonka igula hadlayay ayaa igu yidhi qofka aan u baahan nahay ayaa tahay, howl in aad noo qabato ayaan rabnaa wax kasta oo aad u baahan tahayna waan ku sameyneynaa.’’ ayuu sheegay askariga
Askarigan iyo ragga Shabaabka ah ayaa waxa ay ku balameen duleedka Magaalada Baledweyne si waxyaabaha qarxa ay ugu soo dhiibaan, kadibna ay uu u geeyo xarumaha ciidamada.
Askariga ayaa horay u sii watay saddex askari iyo ciidamo kale, isaga oo aanan ka bixin Magaalada ayeey kula soo xiriireen taleefoonka, wuxuuna u sheegay inuusan haysan lacag uu Mooto Bajaaj ku soo raaco, balse durbadiiba $10 doolar ayeey taleefoonka ugu soo tuureen, maadaama danta ay ka leeyihiin ay tahay mid weyn.
Maxamed Cali Axmed, ayaa tagay goobtii Shabaabka ay ku balameen si waxyaabaha qarxa ay ugu soo dhiibaan, balse meel kore ayaa waxaa ka eegaayay askartii ay wada socdeen, si loo qabto ragga Shabaabka ah oo askariga ay ku wada balameen geed hoostiisa waxyaabaha qarxa inay dhigeen Shabaabka, kadibna uu halkaasi ka qaado.
Markii Shabaabka iyo askariga taleefoonka ay ku wada xidhiidheen ayna is arkeen raggii qaraxa siday iyo askariga, ayaa qorshe xumo dhacday awgeed, ciidankii askariga la socday waxa ay rasaas ku fureen raggii Shabaabka ahaa oo la rabay in si farsameysan loo qabto, taasina waxa ay keentay inay halkaasi ka baxsadaan Shabaabkii qaraxa waday.
Waxyaabaha qarxa ayaa meeshaasi laga soo qaaday, kadibna waxaa Saxaafadda loogu soo bandhigay Xerada lamagalaay, iyadoo halkaasi abaalmarin lagu guddoon siiyay askarigii fashiliyay qorshaha Shabaabka ay doonayeen.
Taliyaha ciidanka Xoogga dalka Somaliya ee Gobolka Hiiraan Tawane Axmed Gurey, ayaa lacag abaalmarin ah Guddoonsiiyay Askarigaasi, wuxuuna siiyay lacag dhan $300 doollar.
Xoogaga Shabaab ayaa inta badan xidhiidh la sameeya ciidamada kala duwan ee dowladda, kadibna waxa ay u balan qaadaan inay siinayaan qarash badan, haddii uu fuliyo qorshaha ay ka doonayaan, askarta qaar ayaa ku dhaqaaqa fulinta tallaabada Shabaabka ay doonayaan, halka qaar kalena ay ka dhiidhiyaan arimahaasi.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/05/ciidamada-oo-qabtay-walxaha-qarxo-2.jpg 360 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-05-21 09:29:282017-05-21 09:29:28SAWIRRO: Askari Millitariga ka tirsan oo balan uga baxay Shabaab
Heerimaaddee waa Eri ama kalmad af soomaali ah taas oo ah HEERIMAAD (Cadoow... Askarigii Qarxiyey Sirti ay wada Galeen Kooxda Al Shabaab